> Resource > iPad > Sidee inuu ka soo kabsado Xiriirada tirtiray ka iPad Mini
Haddaba qofka isticmaalaya mini iPad, waxaa jira qaladaad in laga yaabo inay dhacaan. Qaar ka mid ah khaladaadka in aad sabab u noqon kara taxaddar la'aan ama kaliya waxaa laga yaabaa inaad daalan oo ka dhigi qalad ah. Mid ka mid ah qalad badan waa Kabcada_ shil ah ee xiriirada on iPad mini. Hadda xaaladdu waa in aad u baahan tahay in ay dib u helaan xiriirada kuwa. Waxaad isku dayday xal oo dhan laakiin midkoodna kama ay muhiim tahay. Runta waxa ay tahay, haddii aadan synced aad iPad mini la Lugood on your computer, xiriirrada tirtiray weli la soo kabsaday karo.
Habka ugu wanaagsan ee aad sameyn karto waa in aad ka heli Wondershare Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovey u Mac) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Windows) . Waa waxa aad u baahan doontaa haddii aad rabto in aad hesho kuwa xiriirka la lumay dib. Waa barnaamij soo kabashada file mini iPad lunsan oo u tirtiray ama laga badiyay xiriirada in aad rabto in aad soo kabsado si deg deg ah. Waxaa soo kabanayo xiriirada ka iPad mini by files soo saarida ka Lugood raad raac ah oo qalabka.
Waxaad version tijaabo ah oo xagga hoose ka heli kartaa. Tani version maxkamad free waxay bixisaa fursad u eegis files helay ka hor dib u soo kabashada.
Qabtaan iPad Mini Khasaaray Xiriirada Recovery in 2 Talaabooyinka
Tallaabada 1. Daahfurka barnaamijka iyo dooran Lugood gurmad file in iskaan
Halkan waxaan ku qabtaan kabashada la Wondershare Dr.Fone ee macruufka (dadka isticmaala Windows). Dadka isticmaala Mac, fadlan kala soo bixi version Mac ee barnaamijkan.
Ka dib markii ay soo degsado iyo ku rakibidda barnaamijka, waxaa lagu daahfuri oo waxaad arki doontaa interface ku bilaabatay sida image hoose. Waxa uu baaritaanku iyo bandhigayaa Lugood gurmad files of dhammaan qalabka macruufka in synced la Lugood on your computer.
Dooro gurmad midigta ah ee iPad mini iyo riix Start Scan .
Tallaabada 2. Kulanka Xiisaha Leh helay xiriirada oo waxaan iyaga ku badbaadin on your computer
Wax yar ka scan ku dhameysan doono iyo barnaamijka lagu soo bandhigi doonaa sida hoos ku image. Faylal laga soo gurmad Lugood la tusay doonaa in qaybaha kala duwan ay ka mid yihiin ku giringiriya Camera, Ogow, Xiriirada iyo in ka badan.
Waxaad ka eegi kartaa Xiriirada inay ku eegaan faahfaahin iyaga ka mid ah. Sax kuwa xiriirada aad rabto in aad soo kabsado iyo Riix Ladnaansho iyaga badbaadiya in deegaanka.
Fiiro gaar ah: The xiriirada soo kabsaday si fudud loo keeno kartaa iPad mini iyadoo la kaashanayo Lugood.
Wondershare Dr.Fone Ee macruufka (isticmaalayaasha Mac) iyo Wondershare Dr.Fone ee macruufka (dadka isticmaala Windows) ma taageero kaliya iPad kabashada xogta mini, laakiin sidoo kale ay taageeraan dib u soo kabashada xog ah oo dhan oo ay ku jiraan qalabka macruufka iPhone, iPad iyo iPod taabto. Waxay awood aad ka bogsato ilaa 12 qaabab faylasha ka qalabka macruufka.